फ्यानले कहिले बिबाह गर्ने भनेर बलिउड नायिका सोनाक्षीलाई सोधेपछि उनले भनिन्– के अब मलाई पनि कोभिड लागोस् भन्ने छ ? – OSNepal
सोनाक्षी सिन्हा लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालबाट टाढा छिन् । सोनाक्षी पछिल्लो पटक ‘भुजः द प्राइड अफ इन्डिया’ मा देखिएकी थिइन् । केही समयपछि उनी सामाजिक सञ्जालबाट टाढिईन् । भर्खरै अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले इन्स्टाग्राममा आस्क मी एनिथिङ सेसन गरिन् । जसमा उनले आफ्ना फ्यानका धेरै प्रश्नको जवाफ दिएकी छिन् ।
यसैबीच एक फ्यानले सोनाक्षीलाई उनको विवाहको बारेमा पनि सोधे जसमा सोनाक्षीले रमाइलो जवाफ दिइन् । सोनाक्षीका फ्यानले उनी अहिले के गरिरहेकी छिन् भनेर सोधेका छन् । जवाफमा सोनाक्षीले सोफामा बसेर मार्वल फिल्म हेर्दै गरेको आफ्नो तस्विर पनि सेयर गरिन् । उनको कथाको जवाफ दिँदै सोनाक्षीका अर्का फ्यानले भने, ‘म्याम सबैको बिहे भैरहेको छ, कहिले बिहे गर्ने ?
सोनाक्षीले भनिन्, ‘सबैलाई कोविड लागेको छ, के अब मलाई पनि कोविड लागोस् त ? सोनाक्षीले फ्यानको आग्रहमा आफ्नो ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट तस्विर सेयर गरेकी छिन् । एक फ्यानले सोधेपछि सोनाक्षीले आफ्नो मनपर्ने नाकको स्पिनको तस्विर पनि सेयर गरिन् । उक्त नोज पिन विगत १० वर्षदेखि लगाएको उनले बताइन् । सोनाक्षी सिन्हा छिट्टै कृष जगरलामुडी निर्देशित फिल्म शिवममा देखिनेछिन् । यसमा उनीसँगै साउथका कलाकार महेश बाबु र पवन कल्याण पनि काम गरिरहेका छन् ।